Senator Cumar Cabdirashiid oo ku baaqay in la cunaqabateeyo kuwa qaska ku wada heshiiskii 17-kii September | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Senator Cumar Cabdirashiid oo ku baaqay in la cunaqabateeyo kuwa qaska ku wada heshiiskii 17-kii September
Senator Cumar Cabdirashiid oo ku baaqay in la cunaqabateeyo kuwa qaska ku wada heshiiskii 17-kii September
Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo laba jeer Ra’iisul Wasaare kasoo qoday Soomaaliya kana tirsan Xildhibaannada Aqalka sare ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka weli kajira doorashooyinka Soomaaliya.
Senator Cumar Cabdirashiid oo qoraal soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in qorshaha socda ee lagu baabi’inayo heshiiskii 17-kii September uu yahay tallaabo weyn oo loo qaaday dhanka xasillooni-darrada iyna tahay in la cunaqabateeyo kuwa hannaankaasi qaska ku wada.
Sidoo kale Senator Cumar Cabdirashiid waxaa uu qoraalkiisa ku sheegay in ay muhiim tahay in la dhiso kalsooni ka dhaxeysa saamileyda dalka si dalka horay loogu qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo dhinaca dimoqraadiyada.
“Dadkeenu waxay filayeen talaabooyin wax ku ool ah oo loo qaado dhanka dimoqraadiyada marka loo eego wixii ay xukuumadani filaysay ama ay waligeed diyaar u ahayd inay qabato. Haddaba, hirgelinta heshiiskii 17 Sebt, in kasta oo ay khaladaadkiisa jiraan, ayaa illaa hadda ah xalka ugu wanaagsan ee lagu xasilin karo xaaladda hadda jirta ayuu yiri” Senator Cumar Cabdirashiid.
Qoraalkan kasoo baxay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Senator Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli khilaaf uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka, isla markaana Muqdisho ay ka socdan kulamo looga hadlayo sidii loo qaban lahaa doorasho loo dhan yahay.
Senator Cumar Cabdirashiid oo ku baaqay in la cunaqabateeyo kuwa qaska ku wada heshiiskii 17-kii September was last modified: March 28th, 2021 by Admin
Guddiga Hirgelinta doorashada heer Federaal oo la kulmay Guddiga xaqiijinta Qoondada Haweenka